यी हुन् काठमाडौंमा सस्तोमा खाना पाईने ५ ठाउँ(भिडियो हेर्नुस ) » खबरहरुको एउटै केन्द्र
यी हुन् काठमाडौंमा सस्तोमा खाना पाईने ५ ठाउँ(भिडियो हेर्नुस )
मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ १२:२९ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । नेपालीहरुको बानी प्रायस् घरमा खाना खाएर निस्किने नै हुन्छ। तर, कहिलेकाहीँ हामीलाई काम विशेष वा बाध्यताले पनि घरबाहिर खानाखानु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा अस्पताल बस्दा वाअन्यकामले होटलको खानाखानु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो समयमा हामी सफा, मिठो र सस्तो खाना पाइने ठाउँको खोजीमा हुन्छौं । काठमाडौंमा त्यो खोजी यी ठाउँहरुले पूरा गरिदिन सक्छन् ।
काठमाडौंको व्यापारिक क्षेत्र महाबौद्धमा रहेको यस होटलले होटलले सादा खाना ७० र चिकेन खाना १०० रुपैयाँमा खुवाउँदै आएको छ । यसबाहेक ग्राहकले रुची अनुसारका खाना खान सक्दछन् ।
PREVIOUS POST Previous post: ७ दिनमै शरीरका मुसा, कोठी गायब पार्ने अचुक घरेलु उपाय (भिडियो हेर्नुस)
NEXT POST Next post: चीनको काराओके क्लबमा आगलागी, १८ को मृत्यु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ १२:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ १२:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ १२:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ १२:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ १२:२९